Xildhibaan Ku Baaqay In Wada Hadal Dadban Lala Galo Al-shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xildhibaan Ku Baaqay In Wada Hadal Dadban Lala Galo Al-shabaab
Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo kamid ah xildhibaannada aqalka hoose ee dhowaan lasoo doortey ayaa ku baaqey in wada hadal dadbadan lala furo Xarakada Al-shabaab.
Xildhibaanka oo wareysi gaar ah siiyey Radio baydhabo ayaa sheegay in si loo helo nabad ay haboon tahay in qaab aan toos ahayn loola hadlo Al-shabaab, iyadoo loo marayo Odoyaal dhaqameed iyo wixii lamid ah.
“Waxaa haboon in lagu dayo Al-shabaab in wada hadal iyo waan waan dadban lala galo haddii tan tooska ah ay adag tahay, iyagana ay ogaadaan dowladdana ay qaadato, hoggaamiye dhaqameedyadana ka howlgalaan baa loo baahan yahay” ayuu yiri Xildhibaanka.
Ugu dambeyn xildhibaan Shariif ayaa sheegay in dalka hadda uu galayo marxalado cusub, dowladda cusub ee soo socotana waxa laga doonayo ay tahay oo kaliya sidii ay u xaqiijin lahayd amniga iyo kala dambeynta dalka.
Ururka Al-shabaab ayaa gudaha Soomaaliya ka dagaallameyey ku dhowaad 10-sano, mana jirto wax wada hadal ah oo ay aqbaleen iney la galaan dowladda Soomaaliya.